Banyere - School Central School, Cambridge
E hiwere ụlọ akwụkwọ anyị na 1996 site n'aka otu ndị Kraịst na Cambridge. Anyị nwere aha ọma maka nlekọta magburu onwe ya ma n'ime klasị. Ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na-ekwu na ụlọ akwụkwọ ahụ dị ka ezinụlọ.
Anyị nọ nso ụlọ ahịa obodo ahụ, ụlọ nri, ebe ngosi ihe mgbe ochie, kọleji nke Mahadum Cambridge na ọdụ ụgbọ ala. Anyị nọ n'akụkụ ọnụ ụzọ otu ụlọ ụka mara mma.
Ebumnuche anyị bụ inye gị nnabata ọfụma na ohere magburu onwe ya ịmụ asụsụ bekee na ọnọdụ nlekọta, mmekọrịta enyi. Usoro ọmụmụ anyị na-agba ọsọ n'ime afọ ma ị nwere ike ịmalite izu ọ bụla. Anyị na-enyekwa nkwadebe nyocha. Naanị anyị na-akụziri ndị okenye (site na opekata mpe afọ 18).
Studentsmụ akwụkwọ si ihe karịrị mba 90 dị iche iche mụụrụ anyị ihe, a na-enwekarị ezigbo ngwakọta nke mba na ọrụ na ụlọ akwụkwọ ahụ. Ndị nkụzi niile bụ ndị na-ekwu okwu n’obodo na CELTA ma ọ bụ DELTA tozuru etozu.
Anyị na-elekọta ụlọ akwụkwọ ahụ dịka UK Government na English UK nduzi, na-eme ihe niile dị mkpa iji zere mgbasa nke Covid-19.
Njikwa Schoollọ Akwụkwọ
Tụlọ akwụkwọ bụ Charity a na-edebanye aha (Reg No 1056074) na ndị otu ndị na-ahụ maka ọrụ na-arụ ọrụ ndụmọdụ. Onye isi akwukwo nke ndi isi na ndi isi ochichi na aru oru nke ulo akwukwo kwa ubochi.
Nzere ntozu British Council
'British Council wee nyochaa ma kwadoro Central School School Cambridge na April 2017. Usoro nhazi ahụ na-enyocha ụkpụrụ nke njikwa, ihe onwunwe na ebe obibi, nkuzi, ọdịmma, na ụlọ ọrụ nzere nke na-ezute ọkọlọtọ zuru oke na mpaghara ọ bụla a nyochara (lee www.britishcouncil.org/education/accreditation maka nkọwa).
Akwụkwọ a na-asụ asụsụ onwe onye na-enye ndị nkuzi na General English maka ndị okenye (18 +).
A na-ahụ ike n'akụkụ akụkụ nke mmesi obi ike, nkwekwụkwọ, nlekọta nke ụmụ akwụkwọ, na ohere ntụrụndụ.
Akụkọ nyocha ahụ kwuru na nzukọ ahụ zutere ụkpụrụ nke atụmatụ ahụ. '
Nnyocha na-esote ruru na 2022
Cambridge bu onye ama ama n’uwa nile maka Mahadum ya, akuko ya, ima nma, omumu ihe omumu na ndu umu akwukwo. Gaa na kọleji na...	GỤKWUO
Commitmentlọ akwụkwọ nke Central Language bụ inyere gị aka iji oge gị na Cambridge zuru oke, na-anụ ụtọ gị...	GỤKWUO
Ndị a bụ ụfọdụ ọrụ anyị na-agunyekarị, ọ bụ ezie na ugbu a ha dabere na mgbochi Covid-19, na...	GỤKWUO
2017 Central School School, Cambridge